अस्पतालमै माया बसेपछि ७० बर्षे बाबुकी ५५ बर्षकी प्रेमिकासँग छोराछोरीले गरिदिए बिहे ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/अस्पतालमै माया बसेपछि ७० बर्षे बाबुकी ५५ बर्षकी प्रेमिकासँग छोराछोरीले गरिदिए बिहे !
भनिन्छ प्रेम अ’न्धो हुन्छ । प्रेममा परिसकेपछि न त जात हेरिन्छ न त उमेर नै । भारतको मध्यप्रेदशको एक घ’टनाले प्रेम अ’न्धो हुन्छ भन्ने ह’रफलाई स’त्य सा’वित गरेको छ ।
एक ७० वर्षका वृद्धकाे अर्की एक महिलासँग प्रेम बसेपछि छाेराछाेरीले नै बिहे गराइदिएकाे खबर छ । मध्यप्रदेशका ती वृद्ध उपचारका सिलसिलामा अस्पताल गएका थिए । साेही सिलसिलामा अस्पतालमा भेटिएकी ५५ वर्षीया महिलासँग ती वृद्धकाे प्रेम बसेछ ।
दुवैबीचको प्रेम देखेर उनीहरुका सन्तानले विवाह गराइदिएकाे खबर नवभारत टाइम्सले प्रकाशन गरेकाे छ । समाचारका अनुसार ७० वर्षका ओमबार सिंह नाम गरेका ती वृद्ध स्थानीय ल्ला अस्पतालमा भर्ना थिए । त्यति नै बेला उनको भेट ५५ वर्षकी गुड्डीबाईसँग भयो ।
अस्पताल बसाइमै माया बसेछि तीन दिनपछि नै दुवैले विवाह गर्ने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । अहिले ओमकार सिंहका चार सन्तान छन् रहेकाे जनाइएकाे छ । तर सन्तानले नै ती वृद्धकाे वृद्धकाे बिहे गराइदिए । उनकी श्रीमती भने ३ वर्ष अघि बितेकी थिइन् ।
मुलुकले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक र कृषि उपजबाटै उत्पादन हुने सेता दानाको दुःख धेरै भइसक्यो तर पनि तिनको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल र कृषि उत्पादन चिनीको समस्या दीर्घ रोगजस्तै बनेको छ । दुवै सेता दानाका रूपमा छन् तर तिनमा कालोधन्दा पनि हुने गर्दछ ।
एक महिनाअघि सम्म प्रतिकेजी ८० रुपियाँ खुद्रा मूल्यमा किनबेच भएको चिनी अहिले बढेर ९०–९५ रुपियाँ पुगेको छ । चिनी उद्योगीले कृत्रिम अभाव गराएर मूल्य वृद्धि गराएको आरोप सरोकारवालाले लगाइरहेका छन् । स्वदेशी चिनी उद्योग र साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसनले चिनीको मौज्दात सकिएको बताएपछि बजारमा एक्कासि मूल्य बढेको हो ।
अग्नी पिडितलाई खोटाङ प्राकृतिक प्रकोप सहयोग कोषको राहत
२ वर्ष लगाएर हेलिकप्टर बनाएका युवकले पत्रकार सम्मेलन गरेर हेलिकप्टर उडाउन खोजे लगत्तै मृ’त्यु
भर्खरै बैतडीमा भयानक जीप दुर्घटना, ५ जनाकाे मृत्यु, काे-काे परे दुर्घटनामा याे हेर्नुस्
पर्सामा २३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु